हावा वा कुनै पनि तरल पदार्थलाई एकतिर पठाउनका सहयोग गर्ने उपकरणलाई भल्व भनिन्छ । भल्वको कुरा गर्दा हामी मुटु सम्झिन्छौ । भल्वले रगतलाई एकै दिसातिर बगाउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ । त्यसैगरी सवारी साधनको इन्जिनमा पनि भल्व प्रयोग गरिएको हुन्छ । इन्जिनको भल्व...
नयाँ कार खरिद गर्ने चाहना राख्नेहरु कारको छनोट गर्नु भन्दा पहिले सधै टेष्ट ड्राइभ गर्छन् । यही कुरालाई मनन गरी कम्पनीहरुले पनि ग्राहकहरुलाई टेष्ट ड्राइभका लागि आमन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । टेष्ट ड्राइभबाट सो कार ड्राइभ गर्दा आफूलाई कति सहज लाग्छ र आफ्...
कारमा हुने क्रुज कन्ट्रोलको सहयोगले चालकले एक्सिलरेटर बिनै प्याडल दवाएर पनि कार चलाउन सक्छन् । यसमा कारको स्पिड पहिले नै निर्धारित गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले चालकलाई केहि हदसम्म आराम दिन्छ । क्रुज कन्ट्रोलले यात्रालाई सुविधाजनक पनि बनाउँछ । पहिले प्रिम...
गर्मीमा कारमा सुत्ने गर्नुभएको छ ? होस् गर्नुस् है
गर्मी मौसमको समय छ । यो समयमा गर्मीबाट बच्नका लागि मानिसले धेरै उपाय खोजिरहेका हुन्छन् । कतिपय ब्यक्ति कारमा आनन्दले एसी चलाएर सुतेको पनि पाइन्छ । खासगरी ट्याक्सी ड्राइभरहरु यात्रुको पखाईमा बस्दा कारमै निदाएको देखिन्छ । तर यसरी कारमा जथाभावी सुत्दा स...
घाममा कार राख्दा ६० मिनेटमा कुन पार्ट कति तात्तिन्छ ? यस्तो छ रिपोर्ट
यदि कारलाई गर्मीमा तातो घाममा राख्ने हो भने एक घण्टाकै अवधिमा यसको क्याबिनको तापक्रम ४६ डिग्री सेल्सियस पुग्ने तथ्य पत्ता लागेको छ । यसका कारण कारमा बस्न र चलाउन पनि असहज हुन्छ । त्यति मात्र होइन, यसका कारण कारमा खराबी आउने खतरा पनि बढ्छ । एरिजोना स्...
गाडीको उत्कृष्ट माइलेजका लागि यसो गरौं
वजारमा इन्धनको मूल्य आकासिदो छ । इन्धनको सन्दर्भमा हामी परनिर्भर छौ । आफ्नै उत्पादन नभएकाले इन्धनको मूल्यमा पनि विदेशी वजारवाट प्रभावित हुन परिरहेको छ । यो विद्यमान परिस्थितिलाई हामीले चुपचाप सामना गर्नु परेको छ । सरकारले जतिसुकै मूल्य वढाएपनि हामी त...
कार चलाउदा ध्यान दिनुस् यी ७ कुरामा
कार चलाउन शौखिन व्यक्तिले कार सम्बन्धी केही जानकारी राख्नु अति आवश्यक हुन्छ । नियमित कार चलाउँदा होस वा पहिलो पटक चलाउँदा होस कहिलेकाही अन्जानमा केही गल्ती हुन सक्छ । त्यसैले कारलाई सही कन्डिसनमा राख्नको लागि कारको नियमित रेखदेख गरिरहनु पर्छ । यदि तप...
के हो मोटर बिमा ? कसरी गर्ने ?
कुनै पनि कारणले सवारी दुर्घटना भएमा जनधनको क्षति हुन सक्छ । यस अवस्थामा सवारी साधनको मर्मत, घाइते यात्रुको उपचार र मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुनाले सवारीधनीलाई आर्थिक भार पनि परेको हुन्छ । त्यसैले, यस्ता दुर्घटनाबाट हुने नोक्सानीले कुनै...
कतै तपाईंको कार ओभरलोड त छैन ? ध्यान दिनुस् यी कुरा
साधारणतया कारमा सामान लोड गर्दा ओभरलोड भएको विषयमा खासै चासो राखेको पाइदैन । कार इन्जिनबाट चल्ने सवारीसाधन भएकोले यसलाई धेरैले सामान्य कुरा सम्झन्छन् । तर कारको क्षमता भन्दा बढी यात्री र सामान लोड गरि चलाउनु कार र यात्री दुबैको लागि हानिकारक हुन्छ ।...
आधुनिक समयमा यात्रा गर्नको लागि सवारी साधनको निकै महत्व छ । सबै मानिसहरु सके सम्म आफ्नै सवारी साधन होस् भन्ने चाहन्छन् तर बजार भाउ महँगो भएको हुनाले सबैको लागि त्यो कुरा सम्भव भने हुँदैन । सवारीसाधन खरिद गर्दा त्यसको माइलेज महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसै...
सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विचार छ ? यसो गर्नुस्
कुनै पनि प्रोप्राइटर, साझेदार वा प्रथम सञ्चालकहरुले यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिनु पर्छ । सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा यस सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । (१)प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने प्रोपाइटर, साझेदार...
बस चालकका लागि सुरक्षात्मक उपाय
बस चलाउँदा आफू र साथमा रहेका अन्य यात्रुको जिम्मेवारी चालकको काँधमा हुने गर्छ । यो अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण काम हो । सानोभन्दा सानो गल्तीले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । बस चलाउँदा अपनाउनुपर्ने केही सावधानीका उपाय तल प्रस्तुत गरिएको छ : निद्रा नपुगे...